Soosaarayaasha Mashiinka Shot Benty, Alaabada - Warshadda Mashiinka Shot Benty Machine
Mashiinka Shot Benty
Mashiinka Nooca Dukaanka ah ee Hook Nooca ah
Mashiinka Weelka Rubber Belt Shot Benty Machine
Iyada oo loo adeegsanayo Mashiinka Nooca Dukaanka Nooca ah
H Qalabka Dhismaha Mashiinka B steel Beam steel
Mashiinka Bacaadka ciid
Qeybaha Shot Benty Machine
Shot Benty Machine Spare Parts
Qaybta Xirashada Shot Benty Machine
Mashiinka Buuxinta Sanduuqa Caadiga ee Golaha
Iyada oo loo adeegsanayo Mashiinka Nooca Muuqaalka Nooca Shisheeyaha ee loogu talagalay Dhisidda Birta Dabaqadda
Iyada oo loo adeegsanayo Mashiinka Nooca Shot Benty ee loogu talagalay Qaabka Dhismaha Birta Dabka ah
Mashiinka wax duqeynta ee noocan ah ee loo yaqaan nooca mashiinka ololaya ee toogashada ah, waxaa loo isticmaalaa saxan bir ah. Waxay xoojin kartaa qaab dhismeedka saxan bir ah.
Mashiinkaani wuxuu khuseeyaa miridhku iyo rinjiyeynta dusha sare ee weelka birta, qaybta birta iyo qaab dhismeedka birta ee dhoofinta, gawaarida, mootada, buundada iyo warshadaha mashiinka.
Si otomaatig ah Ahorizontal H Beam Rust Ka saar Qalabka Shot Benty Machine
Si otomaatig ah AHorizontal H Beam Rust Mashiinka Kaarista Shot Benty Machine
Mashiinka rasaasta loo adeegsado waxaa loo isticmaalaa bir bir weyn sida al-qaabeeya bir, weel bir, iwm. Waxay meesha ka saari kartaa miridhku, maqaarka 'oxide slag', alwaaxa qashinka, iyo wixii la mid ah.
Q69 Iyada oo loo adeegsanayo Mashiinka Nooca Shot Benty Machine ee Aluminum Die Casting workpieces
Q69 Iyada oo loo adeegsanayo Mashiinka Nooca Dukaanka Nooca ah ee Aluminium Die Casting
Qalabka duqeynta nooca loo adeegsado ayaa loo isticmaali karaa aluminium u tuurista maqaarka, waxay ka saari kartaa miridhku, maqaarka oksaydh, alxanka, qashinka qashinka iyo wixii la mid ah.
Qalabka Kala Bixinta Sawirka Sawirka ee Birta iyo Qalabka Birta Dabka ee Birta loo Isticmaalo Nadiifinta Dabaqadda dusha sare ee qaab dhismeedka birta
Q69 Ku Gudubista Mashiinka Nooca Dukaanta Nooca ah ee Daaweynta Dusha sare ee Birta
Gudubista Qalabka Balliinka Nooca ah ee loo yaqaan 'Shot Benty Machine' oo loogu talagalay Daaweynta dusha sare ee qaybta waa ka dib sannado horumarin iyo horumar ah, alaabadu waxay gaareen heerkii ugu sarreeyay Shiinaha.
Tikniyoolajiyadda ololka leh ayaa ku fadhiyay meel muhiim ah oo sii kordheysa oo ku saabsan teknolojiyada daaweyn dusha sare ee astaamaha aluminiumka, oo matalaya isbedelka horumarka ee magacyada aluminiumka casriga ah.
Ka dib markii loo yaqaan 'sandblasting', muuqaalka guud wuxuu si wax ku ool ah u saari karaa ciladaha hadhuudhka farsamada, khadka alxanka, hadhuudhka qalafsan iyo wixii la mid ah, oo ay iskaashi la yeeshaan teknolojiyadda daaweynta midabaynta, waxay ku farsameyn kartaa astaanta midab kala duwan iyo midab dusha sare ee ciidda, sidoo kale waxay awoodaa gaarista saamaynta qallafsan ama birta ah ee wanaagsan ee aad ka hesho xulashada bir-dhiska leh cabbir walxaha kala duwan leh.
Q69 taxanaha Birta Balastariga ah iyo Muuqaalka Qaybta Qalabka Muuqaalka Birta ee Birta
Si otomatik ah H Beam Rust saar Mashiinka Shot Benty Machine
Mashiinka duqeynta ee taxanaha Q69 waxaa loo isticmaalaa bir bir weyn sida al-qaabeeya bir, saxan bir ah, iwm. Waxay ka saari kartaa miridhku, maqaarka oksaydh, alxanka, rinjiga qashinka iyo wixii la mid ah.
Q69 Ku Gudub Mashiinka Nooca Shot Benty ee H Beam
Q69 Ku Gudub Mashiinka Nooca Shot Benty ee loogu talagalay H Beam
Mashiinka duqeynta ee taxanaha Q69 wuxuu quseeyaa nadiifinta miridhku iyo rinjiyeynta dusha sare ee H HAM, saxanka birta, qeybta birta iyo qaab dhismeedka bir, tuubbada birta iyo tuubbada maraakiibta, gawaarida, mootada, buundada iyo warshadaha mashiinka.
2. Tilmaamaha wax soo saarka:
1). Aaga aakhiro ayaa aqbalaya naqshada kombiyuutarka, iyo tallaalka sare iyo kan hooseba si wanaagsan ayaa loo qaybiyaa.
2). Waxay qaadataa ogaanshaha sawirka. Waxay leedahay hawlo kontarool otomaatig ah oo loogu talagalay cabbiraadda ballaca, cabirka dhererka, cabiridda barakac.
3. Xabbad-farsameyn farsamo: LA SOCO
4. Adeegyada loo diyaarshay oo la Heli Karo
Waxaan aqbalnaa naqshad gaar ah oo ku saleysan shuruudahaaga. Marka pls si naxariis leh nooso sheeg shuruudahaaga nadaafadeed ee gaarka ah ee shaqadaada isla markaana kooxdayada injineeriyada cilmiga leh ayaa kuu sameyn doona qorshe kuu fiican.
5. Dhex gudub qeybta mashiinka ololaya ee gubashada
. toogashada shirka
. qolka rasaas lagu ridayo
. Nidaamka gudbiyaha roller
. Nidaamka siigada
. qalabka wax lagu xiro
. goos goosad
. Nidaamka xakamaynta korantada
Mashiinka Tumblast Mashiinka Tumble Belt Shot Benty Machine for Springs iyo Bolts
Bixi Naqshadeynta Takhasuska Takhasuska. Naqshadeyn kartaa mashiinka ugu habboon iyada oo la raacayo shuruudaha faahfaahintaada iyo qalabka shaqada!
Mashiinka rasaasta toogashada waa saameyn nadiifin ah, qaab dhismeedka isku haya, buuq hooseeya, qalab dhameystiran oo nadiif ah, waxay leedahay astaamaha soo socda:
1. Mashiinku wuxuu adeegsadaa isteerinka qarniga qarxa ee birjiifka leh, wuxuu leeyahay nolol dheer, qaab fudud iyo astaamo kale.
2. Iyada oo la adeegsanayo daah-ka-buuxinta daah-ka-goynta isku-dhafka, oo leh saameyn kala-goyn wanaagsan iyo wax-soo-saaris sarreeya, waxay leedahay saameyn togan oo lagu wanaajiyo nolosha qulqulka dabka.
3. Isticmaal wadada xarkaha u adkaysata ee xirashada, adigoo yareynaya isku dhaca burburka ifafaalaha ka dibna yareeya dhawaqa mashiinka.
4. Adeegso ururiyeyaasha qashinka garaaca wadnaha, boodhka waxaa lagu ururin karaa boodhka boodhka ama bannaanka ha u bixiyaa bannaanka, hagaajinta jawiga shaqada.
Taxanahan waa mashiinka nooca toogashada lagu ridayo, waxaa badanaa loo isticmaalaa nadiifinta dusha sare ee kabka, qaab dhismeedka, waxyaabaha aan qarxin iyo qeybaha kale. Mashiinkan duqeynta toogashada taxanaha ah wuxuu leeyahay noocyo badan, sida nooca jillaab keliya, nooca laba jibbaar, nooca wiishashka, nooca aan kor u qaadin. Waxay leedahay faa'iido-la’aan, qaab-dhismeedka is haysta, waxsoosaarka sareeya, iwm.
1). Qalabka waxaa badiyaa lagu dabaqayaa ku shaqeynta qalabka shaqada ee dhexdhexaadka ah iyo kuwa yar yar oo baaxad weyn leh. Waxay leedahay faa'iidada hufnaanta sare, qaab dhismeedka is haysta.
2). Qalabka shaqada waxaa lagu rari karaa si joogto ah. Qaabka shaqada ayaa ah, dejinta xawaaraha, ku dhejinta qalabka wax lagu dhejiyo silsiladaha, iyo ka saarida ka dib nadiifinta toogashada.
3). Midkasta oo gogoldhig ah wuxuu culeyskiisu ka laaban karaa 10 kgs illaa 5000 kgs oo leh waxsoosaar sare iyo socod deggan.
4). Waxay saameyn wanaagsan ku yeelaneysaa qaybaha shaqada ee murugsan labadaba dusha sare iyo qaybta gudaha, sida daboolka santuuqa mashiinka iyo xarkaha gawaarida.
5). Waa xulasho fiican oo loogu talagalay gawaarida, taraafikada, mashiinka naaftada, warshadaha gawaarida iyo warshadaha.
1. Meel ballaaran oo nadiifinta gudaha ah oo la heli karo, qaab dhismeed isku xidhan iyo qaabeyn saynis ah. Waxaa loo naqshadeyn karaa lana sameyn karaa iyadoo loo eegayo amarka.
2. Codsi qaas ah oo loogu talagalay qaab dhismeedka shaqada. Waxaa loo adeegsan karaa noocyo shaqo oo kala duwan.
3. Si baaxad leh ayaa looga isticmaalaa nadiifinta iyo xoojinta Qaybaha Fragile ama Qaybaha aan caadiga ahayn, Qeyb ahaan dhexdhexaad ah ama Qayb Weyn, Qeybaha Dabka, Saarista Ciidda iyo Dhamaadka Dibadda.
4. Qaybtii hore u kululaynta iyo qallajinta ayaa qaadatay noocyo kala duwan oo kuleyl ah, sida korontada, gaaska shidaalka, saliida shidaalka iyo wixii la mid ah.
5. Waa la qalabeyn karaa iyada oo qayb ka ah khadka howsha.
6. Qalabka oo dhameystiran waxaa gacanta ku haya PLC, waana qalab ballaaran oo dhameystiran oo heer caalami ah.
Mashiinka rasaasta lagu rito ee H-beam, wuxuu ka tirsan yahay mishiinka wax duqeeya ee nooca, inta badan loo adeegsado dhismaha iyo warshadaha kale. Waxaa loo isticmaalaa in lagu baabi'iyo walbahaarka iyo nadiifinta dusha sare ee nadaafadda ee qaab dhismeedka birta leh cabbirka sare ee birta iyo H steel.
Qaab dhismeedka mashiinku wuxuu ka kooban yahay qolka nadiifinta, albaabka, "Y" track, fekerka iyo qalabka wareegga, qalabka qafiifinta, qalabka korantada, qalabka kalasaarka, qalabka quudinta toogashada, qalabka duqeynta, aruurinta boodhka, nidaamka korontada, iwm.
Mabda'a shaqada ee mashiinka rasaasta lagu ridayo waa in ka dib markii tiro cayiman oo shaqo ah lagu daro weelka nadiifinta, albaabka ayaa xiran, mashiinka ayaa bilaabmaya, qeybta shaqada waxaa wadida durbaanka oo bilaabay inuu wareego. Dhanka kale, pellets-ka lagu tuuray mashiinka rasaasta lagu ridayo ee xawaaraha sare ku shaqeynaya waxay wataan aalad faneed isla markaana waxay ku dhufataa si siman dusha sare ee goobta shaqada, si loo gaaro ujeeddada nadiifinta.
Qalabka wuxuu ka kooban yahay: qolka weyn ee nadiifinta iyo kaabayaasha, aaladda dabka lagu ridayo, qalabka gudbinta mashiinka, gaarsiinta mashiinka wajiga, mashiinka wixiisa, korantada, nidaamka quudinta toogashada, nidaamka soo kabashada mashiinka, nidaamka saarista boodhka, nidaamka dusha sare, nidaamka korantada, iwm.
Yancheng Ding Tai Machines Co., Ltd.
No.9 Huanghai West Road, Degmada Dafeng, Gobolka Jiangsu, Shiinaha
0086- (0) 515-83514688
Aasiya, Yurub: ycdtjx@163.com
Koonfurta Ameerika: merry@dingtai-china.com
Afrika, Oceania: zhihuichen@dingtai-china.com
Waqooyiga Ameerika: dingmeihong@dingtai-china.com
Mashiinka Yancheng Ding Tai © Dhammaan Xuquuqda Aad ayaa Leedahay.
Alaabada la Soo Bandhigay, Khariidadda Goobta
toogtay Mashiinka Peening, Mashiinka ololka rasaasta, Shot Benty Turbine, Mashiinka Shot Benty, Shot Benty Wheel, toogashada Qaybo ka mid ah Xaraashka, Dhamaan Alaabada